China Electric Musoro Massager Remote & Wireless Bhegi Massage fekitori uye vanotengesa | Ubetter
Electric Head Massager Remote & Wireless Bhegi Massage
Muenzaniso Nhamba: ST-703
Chigadzirwa chechigadzirwa: 22 × 6.6 × 5.4cm
Bhatiri Kugona: 1200mAh
Contactor pamusoro tembiricha: 40 ~ 45 ℃
Kushanda modhi: Vibration Yekubatsira Heating infrared
* Cordless & Yakareba Hupenyu Hwemabhatiri: Ubetter isina tambo ruoko rwakabata ruoko massager ine yakavakirwa-mukati inogona kuchinjika lithium-ion bhatiri iyo inogona kushanda makumi masere emamiriyoni pamutero uzere. Iyo massager iri lightweight (chete 2.6lbs) uye inotakurika. Tora uende nayo uye unakirwe nekuzorora kwese kwese muchitima, ndege kana mota.
* Inodziya Yekupisa: Ubetter yakadzika matishu akabata ruoko masajager ine yakasarudzika yekupisa ficha. Ichaderedza kudziya kwomuviri kuti uenderere mberi nekuzorora mhasuru uye mapfundo. Ongorora: USAISA chero misoro yemasaji uye chengetedza matsvuku ekupisa akafumurwa paunenge uchida kushandisa kupisa.
* Dual Percusshion Misoro, Ubetter ruoko rwakabata percussion massager maficha emisoro miviri anoshanda kusvika kumazana matatu nemazana matatu eminiti paminiti kuendesa inoshanda inobudirira kukanya mhosho yemassage pane imwechete-misoro massager munzvimbo yakanangwa yemasaji. 3 seti yemisoro inochinjika misoro inopa kwakanyanya kukwiza kudzikisira kuneta uye kushushikana kwemapoka akasiyana emhasuru.
* Yakasarudzika MaModhi & Kusindimara: Iyo mbiri-musoro wepafudzi masaja ine kupisa ine 3 kusiyanisa percussion kumhanya pasi pe3 mamodhi, ayo anogona kuve akagadzirwa kuitira nyoro inozorodza masaja kana yakasimba yakadzika matissue maseru sezvaunoda. Fambisa nharo dzekutenderera kune yako muviri mapfundo uye unakirwe kuzara kwemuviri kuzorora.
* Chiri nyore kushandisa: ingo chengetedza iyi inopisa inopisa mhasuru nekusimbisa mabhatani, inokodzera vakweguru kuti vashande uye vanakirwe nemasaji makuru pasofa kana pamubhedha, chero nguva uye chero kupi. Zuva rakakodzera raAmai & Zuva raBaba Zvipo zvaAmai kana Baba. Iyo inouya neyakaviri makore garandi uye mazuva makumi matatu emahara kudzoka kwemari kudzoka.
Kumba, hofisi, mafambiro, Zororo
* Imwe neimwe kune colorbox, ine IFU
* Saizi yeBhokisi: 23x8x7cm,
* Saizi yeCtn: 48x26x30cm
* Qty pamusoro 20 '': 17928pcs
* Qty pamusoro 40 '': 37176pcs
* Qty ye40HQ: 43584pcs
Pashure: Kupisa Kutengesa Fekitori Wholesale Inotakurika Yeziso Massager neKudziya
Zvadaro: Akangwara Warm Palace Bhandi
Hot Kutengesa Fekitori Wholesale Inotakurika Yeziso Massage ...
3D Akangwara Magetsi Neck Massager
Akangwara Warm Palace Bhandi